October 12, 2019 - CeleLove
October 12, 2019 Cele Love 0
ဒီနှစ်ဆိုရင် ဘွဲ့ရလေးတွေဖြစ်လာမယ့် ကျောင်းသား(၂၅၀)လေတိမ်းမှောက်ဖူးတဲ့အဖြစ် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုက အခုထက်ထိကျန်ရစ်သူမိဘတွေကို စိတ်ထဲမှာ တနုံ့နုံ့နဲ့ တွေးမိတိုင်းခံစားရခက်နေတုန်းပါ … ။ အနာဂတ်မှာ ထွန်းတောက်လာမယ့် ကျောင်းသားလေးတွေဟာ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုမှာ အကုန်လုံးအသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ ကံကြမ္မာဆိုးတစ်ခုပါပဲ … ။ အထက်တန်းကျောင်းသား (၃၂၅)လောက်ပါတဲ့ သင်္ဘောတစ်စင်းမှာ လူစုစုပေါင်း (၄၇၆)ယောက်ပါပါတယ် … […]
တွေ့တာနဲ့ ချက်ချင်းသတ်ပစ်ဖို့ ထုတ်ပြန်ခံထားရတဲ့ငါးမျိုးစိတ်အသစ် ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ ငါးမျိုးစိတ်အသစ်တစ်ခုက အားလုံးကို တုန်လှုပ်စေပါတယ် … ။ ရေထဲမှာပဲ အသက်ရှင်တတ်တဲ့ ငါးတွေဟာ ကုန်းပေါ်မှာ (၅)ရက်လောက် အသက်ရှင်နေသလို အသက်လည်းရှုတဲ့အတွက် တွေ့တာနဲ့ကို သတ်ပစ်ဖို့ နိုင်ငံရဲ့ သားရဲတိရစ္တာန်ထိန်းသိမ်းရေး ဌာနက ထုတ်ပြန်လိုက်ရတဲ့ငါးပါ … ။ ဒီငါးကို […]
ဗီရာ နဲ့ ပွဲဟာ ဘာဖြစ်လို့ အောင်လအန်ဆန်းကို ကမ္ဘာကျော် သွားစေနိုင်တာလဲ? မနက်ဖြန် ညနေရောက်ရင်တော့ ကျနော်တို့ တစ်တွေ အားလုံး စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ One Championship ရဲ့ One Century ပွဲစဉ်ကြီးဟာ ဂျပန် နိုင်ငံမှာ စတင်ကျင်းပတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲရဲ့ အဓိက ပွဲစဉ်အဖြစ် […]
ပိုက်ဆံမရှိဘူးလို့ ပါးစပ်က အမြဲပြောနေသူတွေအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါပြီ ပိုက်ဆံမရှိဘူးလို့ ပါးစပ်ကအမြဲပြောနေသူတွေအတွက် ပိုက်ဆံမရှိဘူးလို့ ပါးစပ်က အမြဲပြောနေရင် တနေ့တခြား ကြပ်တည်းလာတာ ပိုသိသာလာတယ် … ။ အဆင်မပြေဘူးလို့ ခနခနတွေးနေရင် ပိုပြီး အဆင်မပြေ ဖြစ်လာတယ်။ ဒါ အယူအဆမဟုတ်ဘူး။ဘာသာရေး အတွေးမဟုတ်ဖူး Psycho သဘောပဲ… .. […]
စူပါမုန်တိုင်း Hagibis ဂျပန်နိုင်ငံဝင်ရောက်နေပြီ (ရုပ်သံ) ဖိလစ်ပိုင် မိုးဇလ က နာမည်ပေးလိုက်တဲ့ Typhoon Hagibis ဖိလစ်ပိုင်ဘာသာနဲ့ဟာဂီးဘီး (အလျင်) မုန်တိုင်း ဟာ ပစိဖိ သမုဒ္ဒရာ အနောက်ပိုင်း Pacific Oceanမှာ ပိုမိုအားကောင်းလာတာတွေ့ရပါတယ် … . ။ ဂျပန်နိုင်ငံကို ဝင်ရောက်တိုက်ခက်နေပါပီ။ […]
သမီးဖြစ် သူ ရဲ့မင်္ဂလာ ဦးညဖြတ်သန်း ပုံ ကို အမေဖြစ် သူကြားပြီး သတိ လစ် သမီးဖြစ်သူ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအပြီးးးးး အမေဖြစ်သူက “သမီး မင်္ဂလာဦးည ဘယ်လိုဖြစ်လဲ အမေ့ကို ပြောပြ.. ပြောရမှာ ရှက်ရင် စကားဝှက်သုံးပြီး စာပို့လိုက်” ” ဟုတ် အမေ” […]
အပြင်ပန်းမာကြောတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် အတွင်းစိတ်အရမ်း နူးညံ့တဲ့ A သွေးလေးတွေအကြောင်း A သွေးလေးတွေဟာ သွေးအမျိုးအစားတွေထဲမှာ အလျှို့ဝှက်ဆုံးသွေးအမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ် … ။ အပြင်ပန်းမာကြောတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် တကယ်တမ်းအတွင်းစိတ်အရမ်း နူးညံ့တဲ့ A သွေးလေးတွေအကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် … ။ (၁) အေသွေးလေးတွေဟာ အရမ်းကိုပွင့်လင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် … ။ […]
ဘွဲ့ရခဲ့တာ ဖခင်ဖြစ်သူ ဆိုက်ကားသမားကြောင့်ပါလို့ မရှက်မရွံ့ ဂုဏ်ယူစွာပြောဆိုခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး ပညာသာ အမှန်တစ်ကယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင် ချမ်းသာတာ ဆင်းရဲတာက အရေးမကြီးဘူးဆိုတာကို Sandra Estefani Ramos က သက်သေပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် … ။ ချမ်းသာတဲ့လူတစ်ယောက်အဖြစ်မွေးဖွာလာဖို့ဆိုတာ လူတိုင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော် … ။. စာရင်းများအရ ကမ္ဘာပေါ်မှာကြီးပြင်းလာတဲ့သူများတွေ အများစုဟာ […]
မြန်မာအိုင်ဒေါရဲ့ စီစဉ်ထုတ်လွှင့်ပုံကို မေးခွန်ထုတ်လိုက်ပြီး မြန်မာအိုင်ဒေါကို သွားမပြိုင်ကြဖို့ ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင် သီရိဝင်းလှိုင် Myanmar Idol Season4ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကို တော်တော်များများတော့ကြည့်ဖြစ်ပြီးဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော် ApannPyay ချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ … ။ အဲ့ဒီအထဲကမှ ကိုယ်သဘောကျတဲ့ အသံပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ရော တွေ့နေကြပြီလားဗျို့ … ။ […]
“(10) လပိုင်းအတွက် ၇ရက်သားသမီး တစ်လစာ ဟောစာတမ်း” (1) တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် အိမ်အသစ်ဆောင်မည့်ကိစ္စ အဆင်ပြေအောင်မြင်မည်။ ရပ်ဝေးမှာ သတင်းကောင်းကြားရတတ်သည်။ မိတ်ဆွေများ ၏ ကူညီမှုရရှိမည်။ စပ်တူ လုပ်ငန်း များ လုပ်ရ ကိန်း ရှိပါတယ်။ သင်တန်းတက်ရခြင်း၊ ဆရာသမားလို ပုဂ္ဂိုလ် များ ကူညီစောင့် […]